Fa maninona aho no ao amin'ny BlogBurst? | Martech Zone
Fa maninona aho no ao amin'ny BlogBurst?
Alakamisy Febroary 22, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Azoko antoka fa tsy ho an'iza na iza ny atiny, nefa mivoatra hatrany ny bilaogiko. Misaotra an'i Jim izay niantso ahy aza nahamarika fa niditra an-tampon'ny 4,000 ambony tao amin'ny Technorati aho.
Avy amin'ny Blogburst: Nahazo bilaogy tsara ve ianao? Eny, heveriko fa marina izany.
Mametraka bilaogy toa anao izahay amin'ny tranokala media lehibe. Tsia… raha ny marina, tsy izany.
Misy mahazo valiny amin'ity serivisy ity?
WordPress: Ahoana no fananganana pejy Cloud tag
SPAM amin'ny Andro
23 Feb 2007 tamin'ny 12:53 maraina
miarahaba anao amin'ny famakiana ny haavon'ny 4,000
23 Feb 2007 tamin'ny 8:48 maraina
Misaotra, Steven! Nipoitra indray ny Z-List, nataoko ny fonon'ny Netscape.com miaraka amin'ny iray amin'ireo lahatsoratro ary niarahaba aho a WordPress plugin. Izy telo ireo dia nahazo fampirantiana bilaogy iray taonina izay tena nanaitra ahy ambony. Asa misimisy kokoa !!!
27 Mey 2007 tamin'ny 1:14 hariva
Nandà ahy ny Blog Burst. 🙂
27 Mey 2007 tamin'ny 1:47 hariva
Tsy hanahy aho, engtech… tsy hoe nanao zavatra ho ahy izy ireo!